के हो निपाह भाइरस ? कसरी बच्ने ? - नागरिक रैबार
‘सरुवा रोग भारतमा देखियो भने नेपालमा पनि देखिने सम्भावना बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना सङ्क्रमण भारतमा बढ्यो भने नेपालमा पनि बढ्छ, सङ्क्रमण त्यहाँ घट्यो भने यहाँ पनि घट्छ । त्यसैले सजग हुनुपर्छ ।’
निपाह भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा एक त छँदैछ अर्कोतिर यो भाइरस पाइने चमेरा नेपालमा पनि पाइन्छ । यस्तै भारतबाटै सुँगुर, बङ्गुर यहाँ आयात गरिने हुँदा यो भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम धेरै छ ।
सरकारले निपाह भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भनेको छ तर यस भाइरस बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भने थालिएको छैन ।